Saqafka shabaqa ee Shiinaha Cabbirka musqusha, saxarada barxadda dahabiga ah, Saxarada / Farshaxanka jilicsan ee jilicsan, Kursiga suunka oo leh saxanka baruufka dahabka ah. warshad iyo alaab-qeybiyeyaasha | Qalabka Dcl
Saxarada musqusha, saxarada barxadda dahabiga ah, Saxarada / Farshaxanka jilicsan ee jilicsan, Kursiga xajmiga leh oo leh saxanka baruufka dahabka ah.
Shayga No: BS1041
Qalabka: Barstool, maro jilicsan oo daboolan, naxaas ah lugaha birta la dhammeeyay
Cabirrada: SH: 1070 mm SW: 480mm SD: 435mm SH: 750mm
Xidhmada: 2pcs / ctn
Cabbirka xirmada: 65.5cm x 52cm x 76cm
Miisaanka saafiga ah: 7.92kg / pc
Miisaan culus: 18.52 kg / ctn
Loading Capacity: 500 pcs / 40HQ
Fadhiiso si raaxo leh barxaddan sariirta leh ee xiisaha leh, kuraasta waxay leeyihin dabacsan si tartiib ah oo ay dib ugu laabanayaan kuraasta si aad ugu nasato miiskaaga, lugaha dahabka ahna ay hubiyaan cimri dheeri. Waxaa jira saxarado bar ah oo leh muuqaal casri ah oo qarniga dhexe qurux badan oo la jaan qaada qurxinta kasta.
Iyada oo leh naqshad aad u ballaaran oo iskandaneefiyanka ah, saxarada barxadda leh ee jilicsan ayaa ku habboon Nordic ama dhex-dhexaadka casriga ah.
Ool Kursiga fadhiga iyo dhabarka barxadda dambeedka dambe waxaa lagu dhejiyaa xaydh xumbada leh 23kg / m³ covering daboolku wuxuu ku yaalaa maro jilicsan oo xiiran. Saldhiggu wuxuu ku jiraa birta dahabka ah.
Kursigan barxadda leh ee jilicsan ayaa loo qaabeeyey raaxo wuxuuna u muuqdaa mid si fiican u meeleeya bar casriga
Lugaha waxaa ka mid ah cagaha cagta si looga hortago xoqitaanka.
Dhar jilicsan oo jilicsan oo leh wax kabadan 55 xulasho oo midabbo ah.
Frame Joog dahab ah / chromed iyo lugo cagaaran.
◆ Golaha ayaa loo baahan yahay
Faahfaahinta Xirmooyinka kartoonada
1) Kaararka kartoon tayo sare leh + difaac gees ah + xirmo aan xirnayn oo geesaha leh.
2) Boorso kuxiran booska.
3) Lugaha ayaa si gaar ah loogu duudduubay non-dhoob
4) Shan lakab oo ka samaysan kartoonada loo yaqaan 'Kraft kartoon' xirmo caadi ah (kartoon bunni ah).
5) Qaabeynta xirmada iibsadaha waa mid la aqbali karo.
6) kartoon cad ayaa lagu bixin karaa iyadoo lagu darin khidmadda dheeriga ah.
Hore: Saxarada lugta alwaax xaabada leh Saxarada barnaamyada Eames
Xiga: Saqafka Sofa, Kursiga Fadhiyada, Gacanka Arm
Saxanka jikada jikada
Saxarada Baarka maqaarka
Qalabka birta ee birta ku shaqeeya